केस "Assol पार्क" (पूर्व भवन)
शिमइज होटेलहरू फेला परेन फिल्टरहरू
कोठा फाउन्डेड रिसोर्ट
शिपेजको यात्राको स्वतन्त्र संगठन सजिलो छ!
"किर्नल" - समुद्र
समुद्री लक्जरी - याच क्लब
3-पकाउ भवन पानीको धेरै किनारमा। सबै कोठाहरू समुद्री र बाल्कनरहरूको साथ बालकनीलाई हेरेर आवासमा सबै कोठाहरू। प्रत्येक कोठामा चिसो र तातो पानी, टिभी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक केटल, वातानुकूलित संग बाथरूम छ। प्रत्येक भुईमा तातो पानी संग कूलर छ। प्रत्येक कोठा सम्भव छ एक अतिरिक्त ठाउँ।
क्याफे-भोजन कोठामा एक मौसम हुन्छ (जून 1 देखि सेप्टेम्बर 1 to देखि सेप्टेम्बर)। खाना (बिहानको खाजा, खाजा, डिनर, आधा बोर्ड पूर्ण बोर्ड) एक अतिरिक्त शुल्कको लागि सम्भव छ।
pooding "Anowol-समुद्री" को अगाडि एक स्टोनी ईन्टर्न को लागी एक स्टोन ईन्टर्न को लागी घर। समुद्र तट फ्ल्याट स्थलहरूको साथ सुसज्जित छ, जसमा तपाईं बच्चाहरूको विश्रामको बाँकी, इचानयोग्य गस्तीहरू, छाता, छाता, को लागि पोखरीहरू राख्नुहुन्छ।
प्ले मैदान निकाय, सौना, नि: शुल्क पार्किंग, क्याफेम डिमिलिंग कोठा (होटलबाट 500 मिटर), पानी पार्क (10 मिनेटमा) पानी पार्क ड्राइभ) पार्कनेटियमको स्यान पत्रमा पार्क। गाउँमा, त्यहाँ मास स्टोर, बजार, बस स्टेशन, फार्मेसी, क्याफेन्स, एससीएस एजएफएस, आदि जसमा अन्य रिसोर्ट पूर्वाधारहरू, डिस्टोरेसन स्पोर्ज, एससीएस एजन्स स्पेस, डिस्कोसन अंक।
होटल अन्वेषण शिलियामा अवस्थित छ, समुद्री सतहमा साइज़ीमाको खाडीमा। होटल एक तीन-कथा भवन हो, सुरु मिति 200 2004 हो।
<< p> होटल Ligo मारिता समुद्री किनारमा pgt मा अवस्थित छ। शिल्ज यल्टाबाट 1 km किलोमिटर अपराधको दक्षिणी तटरको दक्षिणी तटरको एक सुरम्य कुना हो। Simmotiz को लागी: सिमफोपोलको एयरपोर्टबाट - 100 किलोमिटर सिमफ्रेपको रेल स्टेशनबाट।
अतिथि जटिल "एक्वपिर्क" - बच्चाहरूसँग रमाईलो छुट्टीको लागि एक आदर्श ठाउँ, जीवन्त रोमान्टिक यात्रा र छुट्टिहरू। कुनै फरक पर्दैन: जाडो वा गर्मी, वसन्त वा शरद - होटेलले बर्षको कुनै पनि समयमा सकारात्मक भावनाहरू र मनोरन्जन दिन्छ।
<< p> हामी क्रिष्टको सबैभन्दा विदेशी ठाउँमा अवस्थित छौं - बिरालोको पहाडको खुट्टामा र कालो समुद्रको तटमा। सफा हावा, संतृप्त साग र समुद्री चिकनाहरूले तपाईंको छुट्टीलाई निलम्बन र जादुईसँग बनाउँदछ। शिपिलको होटल पानी पार्कले एक राम्रो स्थापित राम्रोसँग राखिएको क्षेत्र वरिपरि घेरेको छ, जुन वर्षको कुनै पनि समयमा रमाईलो गर्न रमाईलो छ। सडक पार समुद्र द्वारा एक geseoebo को साथ शिविर पार्क हो।
<< p> जसले शिफिनाका अपराध रिसोर्टलाई चयन गरे, होटलहरू कोठाका धेरै कोटीहरू प्रदान गर्न तयार छन्, उत्कृष्ट सेवा र सस्तो मुद्रा प्रशस्त मूल्यहरू। शिमिना होटेलहरू र होटलहरू आधुनिक भवनहरू हुन् जुन सुन्दर रूपमा आधुनिक भवनहरू हुन् र सहयोगी स्टाफको साथ।
<< p> शिमिनाका होटेलहरू र ओमेसिमा सबै कोठाहरू बाथरूमको साथ आकाशका कोठाहरू छन् जुन एक बाथरूमको साथ एक आन्तरिक रहनको लागि आवश्यक छ:
एक महत्त्वपूर्ण अर्थ रिसोर्टको समान क्षेत्र हो जुन चयनित होटल वा होटल अवस्थित छ। शिल्ज यलोटा नजिकको समुद्री तटपूर्ण गाउँ हो, त्यसैले होटल समुद्र नजिक छ भने यो अधिक सुविधाजनक हुन्छ। बोनसको क्याफेस र पसलहरू छन् जुन हिंड्ने दूरी भित्र छ।
शिमिलका होटलहरू पनि इलाकामा पूर्वाधारको उपस्थिति द्वारा भिन्न छन्। यो कार पार्क हुन सक्छ, सौना, मालिश कोठा, पौंडी पौंडी पोखरी, खेल मैदान। पाहुनाहरू होटेल वा होटलमा क्याफेट होटेलको लागि खाना वा खानाको मजा लिन सक्दछ, र तिनीहरूले रूममा वा साझा भान्छामा स्वतन्त्र रूपमा तयारी गर्न सक्दछन्। कोठामा सफा गर्नु नियमित रूपमा गरिन्छ, अंडरवियर केही दिन एक पटक परिवर्तन हुन्छ।
<< p> हामी सामिज 2021 मा आराम ईम्पेडियाविना बिना प्रस्तुत गर्दछौं। हाम्रो साइटमा वस्तुहरूको ठूलो चयन: त्यहाँ मूल्य, वर्णन, समीक्षा, तस्वीर नम्बरहरू, फोटोहरू, फोटोहरू, फोटोहरू र फोन नम्बरहरू छन्।
शिपिज दक्षिणी तटमा रहेको एक सुरम्भाल शहरी प्रकार गाउँ हो र सेफस्टोपोल, सिमफेरपोलबाट 100 किलोमिटबाट अवस्थित छ। यो धेरै पर्यटकहरूको मुख्य किनारमा राम्रो बस्तीमा गर्मीको बिदाका लागि मनपर्ने ठाउँ हो। शिमसको समुद्री तटहरू थोरै छन्, साना मूर्तिहरूले ढाकिए जसले आँधीबेहरीबाट जोगेका छन्। यहाँ पानी सँधै सफा र पारदर्शी रहस्यमा धेरै प्रकारका धाराहरूमा निर्भर गर्दछ। समुद्री किनार लगभग जंगली हो, जसले तिनीहरूको मूल सौन्दर्यलाई रक्षा गर्यो। सोफा चट्टानमा सब भन्दा सुन्दर र लोकप्रिय बीच।
मा आराम गर्नुहोस्:
Simimiz मा आराम रमाईलो र चाखलाग्दो हुनेछ। आवास को लागी, तपाईं होटल वा आरामदायी पार्जिन घर छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, जुन यहाँ धेरै छ, हरेक स्वाद र बजेटको लागि।
शिफिजमा, धेरै प्राकृतिक आकर्षणहरू जुन भ्रमण गर्न लायक छन्। निस्सन्देह, सबैभन्दा सुन्दर पर्वतहरू, चट्टान र चट्टानहरू, जसमा धेरै पौराणिक कथाहरू फोल्ड हुन्छन्।
। 2012 देखि बिहान काम गरीरहेको छ, त्यो हो, यो एक अपेक्षाकृत नयाँ होटल हो। यसको डबल कोठा टेलिभिजन र एयर कन्डिसन संग सुसज्जित छन्, समुद्र वा हिमाल प्रस्ताव को दृश्य। कोठाहरू क्लासिक शैलीमा सजाइएको छ - सुन्दर, तर केहि अनावश्यक केहि छैन।
समुद्रमा 2- minutes मिनेटमा पुग्न सकिन्छ। पाहुनाहरू "शिपिया" एक सामान्य सुसज्ड समुद्री तट आनन्दित। नजिकैको बस्तीको सबै भन्दा राम्रो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आकर्षण पनि हो, उदाहरणका लागि।
SimeIZ मा, त्यहाँ एक बार छन्। ब्रेकफास्टहरू रेगर्भेसन रेटरमा समावेश छन्, र डिनर र डिनरहरूको अर्डर गर्न सकिन्छ। संस्थाको भान्छाको भान्छा रूसी, ट्यायर र टर्की (जुन धेरै असामान्य र रंगीन छ) हो।
यस होटल होटेलको बालकताबाट कुखुराको सीनोरारास हो। समुद्र तट (ढुb्गा, आफ्नै षडयन्त्र पनि छ) तपाईं शाब्दिक प्रति मिनेट र शिफिनको केन्द्र पनि नजिकै छ।
संस्थासँग सान्त्वनाको सबै आवश्यक बिभिन्न कोटीहरूको साथ 2-सेटर अपार्टमेन्टमा छ। सबै कोठाहरू टेलिभिजनहरू, रिफ्रिजरेटरहरू, सञ्चालन र वातानुकूलितको साथ सुसज्जित छन्।
संगठित खानाहरू प्रदान गरिएको छैन कि होटेलले प्रदान गर्दैन, तर अतिथिहरू सुसज्जित साझा भान्छामा पहुँच छ। पसल र बजार नजिकै अवस्थित छ। ती पर्यटकहरू खाना पकाउन चाहँदैनन्, नजिकैका असंख्य क्याफेराको फाइदा लिन सक्दछन्।
परिभ्रमण समीक्षाले विशेष रूपमा उत्तम सफाई मनाउँछ। दैनिक आवासको सफाई उत्पादन बिना ग्राहक आवश्यकताहरू बिना।
<< p> यो होटेल समुद्रमा लगभग धेरै साझेदारहरू, पहिलो रेखामा अवस्थित छ। "Yahtt क्लब" मा अन्य सर्तहरू पनि सबै चुपचाप माथि छन्, खास गरी यदि तपाईं मध्यम मूल्यहरू विचार गर्नुहुन्छ।
आवासीय परिसर यहाँ बिभिन्न छन् - सानो सामान्यन 2-सेभर "अर्थशास्त्रीहरू" सम्म सबै सुविधाहरू सहितको अन्जानहरू "समझदार अपार्टमेन्टहरू छन् जुन people व्यक्ति सम्ममा समायोजित गर्न सक्दछ। केहिसँग किचन छ।
होटेलसँग क्याफे छ, जहाँ पाहुनाहरूले छुटको अधिकारको आनन्द लिन्छन्। कोठा वा सुसज्जित साझा भान्छाको कोठामा फ्रिस्टिभ रूपमा तयार गर्न यो पनि सम्भव छ।
होटेल शिमिना, रसिया: समीक्षा, सम्पर्क, सम्पर्क, फोन नम्बर, मूल्य नम्बर, मूल्य संख्या, अप-टु-डीएस-डीस्टेड जानकारी। साइट साइटमा सामिज, क्राइमियामा 1 14 होटलहरूको विस्तृत विवरण समावेश गर्दछ।
शिपिंगमा बुकटिंग होटलहरू। शिल्ज अपराधको प्रायश्चितको सब भन्दा सुन्दर गाउँहरू मध्ये एक हो। चित्रकार प्रकृति, न्यानो समुद्र, तातो सूर्य र अविश्वसनीय अतिथि सत्कार गर्ने बासिन्दाहरू - यसले रिसोर्ट गाउँलाई पर्यटकहरूको लागि आकर्षक बनाउँदछ।
हाम्रो साइटमा होटेलहरू र होटल शिलियाहरू प्रस्तुत गर्दछ: वर्णन, मूल्य, मूल्य, फोटोहरू, फोटोहरू, सेवाहरू र अतिथि समीक्षाहरूको सूची। यो जानकारी होटेल छनौट गर्न मद्दत गर्दछ, तर यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं हाम्रो बुकिंग सेवा कल गर्न सक्नुहुनेछ र योग्य प्रबन्धकहरू तपाईंलाई होटेल छनौट गर्न मद्दत गर्न खुसी हुनेछन्।
हाम्रो बुकिंग सेवाको सहयोग एक ठोस फाइदा हो। पहिलो, हामी शिपिलमा होटलको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछौं, दोस्रो, म कुनै पनि मनपर्नेमा नि: शुल्क एउटा कोठा बुक गर्नेछु, तपाईंको समय र पैसा बचत गर्नुहोस्!
मा होटलहरूको बारेमा बारम्बार सोध्नुहोस् प्रश्नहरू
Simimiza रिकल मा आवास लागत 1220 रूबलहरु बाट शुरू हुन्छ। 4-स्टार होटलमा आवास 711345 रूबलबाट सुरू हुन्छ।